भरतपुर २ क्षेत्रपुरमा विजय सुवेदीको घरदैलो,मतदाता भन्छन्ः भोट दिन्छौं विकास गरिदिनुस् ! – Saurahaonline.com
भरतपुर २ क्षेत्रपुरमा विजय सुवेदीको घरदैलो,मतदाता भन्छन्ः भोट दिन्छौं विकास गरिदिनुस् !
चितवन, मंसिर १ । चितवन क्षेत्र नम्वर २ (ख) बाट प्रदेशसभाका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले आज(शुक्रवार) पनि घरदैलो अभियानलाई निरन्तरता दिएका छन् । उनले आज भरतपुर महानगरपालिका बडा नम्वर २ क्षेत्रपुरमा घरदैलो गरेका छन् । बडा नम्वर २ को मितेरी टोल,रामकृष्ण टोल,विक्रम मार्ग ,रामेश्वर टोल लगाएतका क्षेत्रमा घरदैलो गरिएको हो । घरदैलोका क्रममा स्थानियले सुवेदीलाई अभिर र मालाले स्वागत गरेका थिए ।
घरदैलोका क्रममा मतदाताले सुवेदीलाई जनताका न्युनतम आवश्यकता पुरा गर्ने काम गर्न सुझाव दिएका छन् । उनिहरुले भरतपुरलाई व्यवस्थित बनाउन दिर्घकालिन योजना वनाउन आग्रह गरेका छन् ।
भोट दिने तर काम गर्ने प्रतिवद्धता उम्मेद्वारले व्यक्त गर्नुपर्ने उनिहरुको भनाई छ । सुवेदीले मतदातासंग अहिलेसम्म आफुले गरेका काम र आगामी योजनाका विषयमा जानकारी गराएका थिए । उनले चितवनको दिर्घकालिन गुरुयोजना र भरतपुर अस्पतालको सुधारमा पु¥याएको योगदान स्मरण गर्न मतदातासँग आग्रह गरेका थिए ।
इच्छाकामना गाउँपालिका, कालिका नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ७, १०, ११, १२ र २९ समेटिएको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा कूल एक लाख आठ हजार २ सय १९ मतदाता छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ अन्तरगत (क) र (ख) प्रदेश रहेका छन भने (क) प्रदेश क्षेत्रमा कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका सहित भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १,३ र २९ पर्दछन् ।
त्यस्तै (ख) प्रदेशमा वडा नम्बर २, ४, ५, ७, १०, ११ र १२ नम्बर वडा पर्दछन् । यस निर्वाचन क्षेत्रमा सम्युक्त बाम गठबन्धन तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा कृष्णभक्त पोखरेल, प्रदेशसभा (क) मा घनश्याम दाहाल अविनास र प्रदेशसभा (ख) मा बिजय सुवेदीले उम्मेद्वारी दिएका छन् ।